ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 20180မှတ်ချက်များ 1091
ကြော်ငြာများ Facebook က,, E-book, စျေးကွက် Youtube, Twitter ကို နှင့်ဘလော့ဂ်များနေ့တိုင်းသို့မဟုတ်အပတ်တိုင်းပေါ်လာသောသူတို့ကိုသစ်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်, အကယ်စင်စစ်, ကုမ္ပဏီများသည်မိမိတို့ခိုလှုံသောတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကူညီ Instagram ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်.
ဒါပေမယ့်ဖက်ရှင်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာအစစ်အမှန်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ detect စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စစ်မှန်တဲ့: ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤနည်းလမ်းများအတွက်စိုးစံတစျခုအရာရှိကွောငျးကိုသိ! သို့သော် Instagram ကိုစျေးကွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကဘာလဲ?
သငျသညျအဘယျတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်ခဲ့လျှင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်ဒါဟာသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကို, သင့်ပစ်မှတ်စျေးကွက်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်စျေးကွက်ရန်သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အယူအဆနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြန့်နှံ့ဖို့ key ကိုသံတမန်ကို အသုံးပြု. အပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်းစျေးကွက်၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ကိုထက်ပိုမို 300 သန်းကိုလစဉ်အသုံးပြုသူရှိပြီး, Instagram ကိုအသုံးပြုသူ 70% ပြီးသားသူတို့က၎င်း၏အကြောင်းအရာရှိအောင်ချင်ခဲ့တယ်တူညီတဲ့ platform ပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရှာဖွေကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်အဲဒီင် Instagram ကိုစျေးကွက်ကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခဲ့လျှင်။
ကောင်းပြီ, Instagram ကိုသူတို့ထဲကအတော်များများအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ပရိသတ်ကိုတိုးလာကြပါပြီ, သြဇာလူတို့အဘို့ရာအရပျဖြစ်လာသည်။ ဤရွေ့ကားနာမည်ကြီးတွေအင်တာနက်ကိုနဂိုအတိုင်းစားသုံးသူတစ်ကြီးထွားလာပရိသတ်ကိုကျော်ကြီးမားအခွင့်အာဏာရှိသည်။
သူတို့ကသင့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးအကြီးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်နှင့်ရရှိနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်? သငျသညျအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလ၌သင်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။
အတွက် ကုမ္ပဏီများမှသငျသညျသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအလုပ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သောလူဦးဖော်ထုတ် start သငျ့သညျ။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်လမ်းထဲမှာတပြင်လုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏တရားရှိဖို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်သင်, ဒီအဆင့်မှာရှုပ်ထွေးမှုအရာမှတက်ချင်ကြဘူး စျေးကွက်နည်းဗျူဟာ။ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မကြိုက်ဘူးလျှင်တစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်ဆက်ဆံရေးတွန်းရန်မလိုပါ, သူတို့ကိုရပ်တန့်စိတ်တော်ပြီးတော့, note ကိုယူပါ။
အကယ်၍ သင်ကသူတို့နှင့် ဆက်လက်၍ တရားတွေ့ပါကသင်၏ထုတ်ကုန်ကိုမှားယွင်းသောနည်းဖြင့်ချီးမွမ်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ , မှတ်ချက်များစွာအတွက်အဆုံးသတ်ပရိသတ်ကိုထံမှ "spam ကို" ။ သင်၏စီမံကိန်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်တွေ့ရှိပြီးသည်နှင့်ဆက်သွယ်မှုမ ၀ င်မီစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းပါ။
tools တွေအသုံးပြုခြင်း Instagram ကို Analytics မှ ဒါဟာ, မှတ်ချက်များတူသောအရေးကြီးသောမက်ထရစ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ကတိကဝတ်နှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ကြီးစွာထိခိုက်မှုရှိကြောင်းအရေးယူမှုမှမခေါ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကို update နိုင်ဖို့အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမဟာဗျူဟာနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရသင့်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ သူကထိထိရောက်ရောက်ဒီစီမံခန့်ခွဲလျှင်, ရလဒ်နှင့်အတူအံ့သြခြင်းနှင့် အကျိုးခံစားခွင့် အဆိုပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှိသည်.
အ Instagram ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက် အသုံးပြုသူများကသင့်ရဲ့ဖောက်သည်တဦးဖြစ်နိုင်သည်ကိုအရေးပါသောပရိသတ်ကိုဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမို Instagram ကို TV က.
1 Instagram ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစျေးကွက်
1.1 Instagram ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသြဇာ
Instagram ကိုဓာတ်ပုံများများအတွက်အကောင်းဆုံး apps များ၏ 4
ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2018
Instagram ကိုစာပိုဒ်တိုများ】အကောင်းဆုံး 70 【